HONEYBEE: QAAB DHISMEEDKA, NALKA, QAABABKA WAREEGGA NOLOSHA IYO CONTENT - BEEKEEPING
Honey, laga yaabee, waa mid ka mid ah hadiyadaha ugu qiimaha badan ee dabeecadda, kaas oo aadanaha muddo dheer la ogaa oo la qiimeeyay.
Beekeeping waa xirfad u baahan in aqoon gaar ah oo ku saabsan shinnida malab (ka dib oo dhan, shinni kasta ma soo saaraan malab), ururinta shinni qoyska ah iyo xaalado raaxo leh noloshooda.
Qaab dhismeedka shinni ee Honey
Jirka cayayaanka ayaa si siman u qaybsan seddex qaybood oo muhiim ah: madaxa, laabta iyo caloosha.
On madaxa waa antenna antennas, indho indhayn iyo saddex indhaha fudud, qalab afka ah. Antennae waa xubno muhiim ah oo taabasho ah iyo caawimaad si ay u socdaan meel bannaan. Afka ama proboscis wuxuu ka kooban yahay dhowr xubnood: jejebyada sare iyo hoose, dibnaha sare iyo hoose.
Ka feker qaybta laabta, inta baaluq oo ay leeyihiin shinni. Waxay leedahay laba labo oo baalasha midab leh: hoose iyo sare. Baalasha hoose ee qaybta sare waxay leedahay qabatooyin, kuwaas oo inta lagu jiro duulimaadka ay ku xiran yihiin labada baalood ee sare.
Akhri waxa aad u baahan tahay inaad ogaatid marka hore oo dhan oo ah beekhaarka bilawga ah.
Caloolgu waa saddex lugood oo lugood ah. Dhinaca lugaha waxaa lagu qalabeeyaa buraash kaas oo shaqaaluhu nadiifiyo manka, isaga oo ku qeexaya dambiilaha. Cajiimadaha waxay ku yaalaan lugaha cirridka.
Cayayaanka waxay leedahay muuqaal adag oo adag (faleebo ka mid ah maqaarka qofka), kaas oo ka ilaaliya xubnaha gudaha waxyeelo kala duwan ama heerkulka heerkulka dhibcaha waxayna fulisaa shaqada qalfoofka.
Marka lagu daro daboolka adag, jidhka waxaa lagu daboolay timo badan.
Daboolida timaha waxay qabataa hawlo fara badan oo muhiim ah:
jirka ka ilaaliya wasaqda;
waxay u adeegtaa in lagu wareejiyo manka;
Iska ilaali cayayaanka ee xilliga qaboobaha (shinni ah waxaa si adag loo cadaadiyaa midba midka kale, oo abuuraya nooca tangle).
Ma taqaanaa? Shinniisha boqoradda waxaa loogu yeeri karaa carmoon madow, markaa kadib waxay la socotaa, ninka ayaa geeriyooday, guskiisa oo ku jira jidhka ilmo-galeenka.
Noocyada gudaha iyo nidaamyada gudaha
Way adagtahay in la rumaysto, laakiin qaabdhismeedka xubnaha gudaha ee muraayadda ayaa si buuxda u ciribtira jidhka bini'aadamka: Neefsashada, dheefshiidka, hababka wareega ee shinnida ayaa si fiican loo horumariyaa, waxay leeyihiin wadne, maskax, iyo dareen adag oo adag.
Nidaamka dheef-shiidka wuxuu u qaybsan yahay saddex qaybood:
Waaxda koowaad - afka, maqaar-gacmeedka, hunguriga, goosashada malab;
labaad - calool xanuun;
saddexaad - mindhicirrada.
Sida nidaamku u shaqeeyo: marka la nuugayo, dheefshiidka iyo isbeddelka nectar malab, qanjirrada ku yaal madaxa iyo qaybaha qulqulka (salivary iyo subfaryngeal) ayaa si toos ah ugu lug leh.
Cuntada ayaa sii wadi doonta hunguriga hunguriga, oo ku yaala mandheerta, xuubka, balaarinta, waxay u sameysmeysaa goosashada kaydinta malabka. Qaybtan oo ku jirta qaab faaruq ah ayaa leh miisaan dhan 14 mm, laakiin iyadoo la adeegsanayo muruqyada, oo la buuxiyo, waxay u fidisaa saddex ilaa afar jeer. Iyada oo la adeegsanaayo muruqyada isku midka ah ee cunaha iyo mindhicirka, giigga ayaa riixaya waxyaabaha ka baxsan.
Marka xigta waxay timaaddaa caloosha, dhab ahaantii - tani waa mindhicirka, kaas oo hababka dheef-shiid kiimiko ah.
Waaxda saddexaad - mindhicirka waxaa matalaya laba geesood: dhuuban oo toosan. Malanku waxa ku jira cuntada raagay ee aan la daboolin, saamaynta waxyeellada leh ee ay ka baabi'iyeen marxaladdaha dheeraadka ah iyada oo la sii daayo maaddooyinka ka soo horjeeda qanjidhada.
Cayayaanka ayaa leh nidaam neefsasho oo awood leh oo daboolaya dhamaanba jirka.
Ku neefso iyada oo loo marayo furitaan badan oo ku jira jirka.: Saddex xaglood ah laabta iyo lixda caloosha. Dareemahaas, hawadu waxay mareysaa timaha, nadiifinta, waxay gashaa bacaha hawadu ku xiran tahay midba kale, ka dibna oksijiin ayaa lagu qaadaa trachea oo dhan jirka oo dhan. Caabuqiddu waxay dhacdaa iyada oo loo marayo saddexda qof ee isbaarooyinka ee ku yaalla gobolka gudahiisa.
Qeybta shanaad ee qolka shinnida waa sida tuubo fara badan, jirka wuxuu u kala bixiyaa ilaa dhabarka ilaa qaybta sare ee jirka, buunku wuxuu ku yaalaa gobolka gudahiisa.
Hemolymph waa dheecaan unugyo ah oo aan midab lahayn halkii dhiigga ee cayayaanka, dhab ahaantii, plasma ee fuliya isla shaqeynta dhiigga aadanaha. Qalabka wadnaha ayaa ka gudbi kara caloosha oo ka timaadda caloosha ilaa madaxa, iyo dhajiska iyo qulqulka qalabka nadiifka ah ayaa xakamaynaya muraayadda hadda la isku haysto. Gubashada wadnaha ee muraayad ku jirta xaalad degenaansho - 60-70 garaac daqiiqaddii, isla markiiba ka dib markii duulimaadku kordhayo ilaa 150 garaac.
Mid ka mid ah alaabooyinka ugu qiimaha badan ee kaydinta xoolaha waa malab, waxayna noqon kartaa noocyo kala duwan, tusaale ahaan, acacia, acacia, koronto, kalluun, lime, fatselium, rapeseed, cad, iyo xitaa duurjoogta.
Shinbir waxay leedahay shan indho oo u muuqda 360 darajo oo is dul saaran iyo wax kasta oo kor ku xusan iyo kan hoose.
Mid kastaaba wuxuu arkaa waxa hortiisa ku yaal, oo dhammaantood waxay arkayaan waxa ay ku arkaan hal sawir. Aragga waxaa loo yiraahdaa masaakiic, indhaheeduna waxay ka kooban yihiin 4-10 kun oo qof (oo ku xiran xubinimada cadaymaha). Aragtidani waxay kuu ogolaanaysaa inaad aragto jihada iftiinka iftiinka iyo go'aaminta booska qorraxda, xitaa cimilada daruurta leh.
Dareenka urta iyo taabashada waa antennae ku yaal madaxa iyo qeyb ka mid ah timaha daboolaya jirka. Antennae waxay sidoo kale u oggolaataa shinni si loo ogaado cimilada: heerkulka, qoyaanka. Burooyinkeeda dhadhanka ah waxay ku yaalaan feeraha, antennae, proboscis iyo cunaha. Cayayaanka ma laha dhegaha, laakiin waxay leedahay maqalka. Calaamaduhu waxay ku yaalliin qaybo ka mid ah jirka iyo lugaha.
Ma taqaanaa? Unugyada malabku waa qaab muuqaal leh, jajab tobanle oo leh jumlado sax ah iyo xaglo isku mid ah.
Noocyada wareegga nolosha
Qoyska Bee waxay u qaybsamaan seddex garaac: uur-jiifka, diyaaradaha iyo shaqaalaha. Waayeelku waa ka duwan yahay qof walba. Intee in shinni nool ay ku xiran tahay dhadhanka: boqoradda waxay ku nooshahay ilaa todobo sano, diyaaradaha aan duuliyuhu joogin shan asbuuc, shaqaaluhu waxay ku nool yihiin ilaa siddeed toddobaad.
Dhamaadka jiilaalka, ilmo-galeenku wuxuu dhigayaa ukun, dirxiga wuxuu u muuqdaa saddex maalmood gudahood. Dirxiga waxaa lagu quudin karaa shinni shaqeynaya qiyaastii lix maalmood. Dabadeed xargaha oo gacan ka geysanaya dhir ayaa ku xidhan unugta, halkaas oo ay ku dhalato - u noqotaa cayayaan qaangaar ah.
Waxay qaadataa qiyaastii 12 maalmood, iyo muuqaal muuqaal - shakhsi ka duwan oo ka soo baxa shimbiraha oo buuxa oo abuuray oo kaliya maqaarkiisa jilicsan. Doorka ay tahay in la quudiyo caleen, "nadiif" rugta iyo qabashada waajibaadka kale ee "reerka".
In rugta ay xukumaan madaxda sarre. Doorka ilmo-galeenka ayaa hoos loogu dhigi jirey iyo dib u dhiska qoyska shinni. Waxay ka tegi kartaa rugta oo kaliya inta lagu guda jiro.
Diyaaradaha - ragga, waa kuwo waaweyn, ma lahan xargo. Hawlgalkooda noloshooda ee rugta ayaa ah bacriminta ilma-galeenka. Waxaa xusuus mudan in isla markiiba la isweydiinayo maraakiibta dhintay. Qaar badan oo ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ku dhalanaya finan yaryar marka loo baahdo in la isku duubo ilmo-galeenka, sidaas darteed kuwa aan ka qaybqaadan nidaamka ladilay ayaa si fudud looga saarayaa qoyska.
Shaqaalaha waa shakhsiyaad dumar ah.. Tijaabooyinkan oo dhan garabka oo dhan "guriga" iyo meel ka baxsan. Tijaabada dhalinyarada ayaa mashquul ku ah nadiifinta rugta iyo daryeelidda dirxiga, iyo waayo aragnimo ah qashinka ururiya, kormeerida hannaanka rugta - cimilada, dhismaha, siinta qoyska si loo ilaaliyo.
Noocyada ugu caansan ee dhirta malab
Dhirta Honey waa noocyo kala duwan, oo ka duwan midba midka kale ee muuqaalka iyo qaar ka mid ah waxyaallaha horumarinta iyo waxqabadka nolosha.
Ka feker kuwa ugu caansan:
Yurub mugdi ah - nooca ugu caansan. Waxay leedahay jir weyn oo mugdi ah iyo baaritaan gaaban. Malabta ay soo saaraan noocyada ayaa ah iftiinka midabka. Noocadani waa xannibaad, waxay u muuqataa dagaal. Waxaa ka mid ah sifooyinka wanaagsan ee qoyska waa iska caabin cudur, bacriminta, iyo caabbinta cimilada. Mid ka mid ah qoyska xilli ciyaareedkan wuxuu keenaa 30 kg oo malab ah.
Steppe Ukraine. Xajmiga yar yar, midabka jaalaha ah, jilicsan, aan dagaal lahayn. Ku adkeysi qabow iyo cudur. Inta lagu jiro xilli, qoysku wuxuu soo saaraa ilaa 40 kg oo malab ah, kaas oo isbarbardhigaya nuucyada kale.
Fiiri cayayaanka caanka ah ee beeska, oo raadi farqiga u dhaxeeya iyaga.
Kawaanka Cabbirku wuxuu la mid yahay jinsiga Yukreeniya, midabka jidhku waa mid huruud ah. Qulqulaha qulqulo dheer, oo awood u leh in uu gaaro nectar xitaa laga bilaabo koobab qoto dheer oo ubax ah. Hawlaha adag, xitaa ka shaqeeya fogaanta, adkaysiga cudurka, laakiin gardarrada. Waxsoosaar hal qoys ah - ilaa 40 kg.
Talyaaniga laga soo dhoofiyo Apennines, wuxuu leeyahay baaritaan dheer, calool huruud ah iyo qaylo dherer leh jirka oo dhan. Waa deganaansho iyo nadiif, waxay baabi'inaysaa aboorka, khalkhalka ku ah finan, si taxadar leh u nadiifiso finan, taas oo saameyn togan ku ah alaabooyinka foosha. Waxay awood u leedahay inay ka gudubto cudurka, laakiin waxsoosaarku aad ayuu uga hooseeyaa kuwa kale.
Warshadda malabta carpathian wuxuu leeyahay jirka cawliga ah, ma aha dagaal, wuxuu caan ku yahay beekeepers. Baaxad aad u badan, iska caabin heer kul hoose, wax soo saar leh - ilaa 40 kg.
Qawaaniinta aasaasiga ah
Beekeeping waxay u baahan tahay ugu yaraan aqoon aad u yar oo ku saabsan dhismaha geela shimbiraha, baahidooda, ka bilaabashada meesha "guriga" iyo qaabkeeda.
Abiaryar waxaa la dhigayaa qalalan, oo laga soo dajiyey meelaha dabaysha, waa in la ilaaliyo iyada oo lagu beerayo xoortay geedihii. On goobta ku beeray dhirta malab dhirta.
Waa muhiim! Suurtagal maaha in la qalabeeyo meel u dhow waddooyinka iyo goobaha warshadaha: kiiska ugu horeeya masaafada ugu yaraan shan boqol mitir, tan labaad - illaa shan kiilomitir.
Xeerarka hagaajinta guriga ee beeska
Guryaha rugta waxaa lagu dhajiyaa meel fog oo saddex mitir u dhaxeysa, toban mitir u dhexeeya saf. Si loo aqoonsado beeska guryahooda waxaa lagu rinjiyeeyay cadaan, jaalle ama buluug.
Si looga hortago cayayaanka xayawaanka, daaqadaha "guryaha" waxay ku xiran yihiin xariijin ganaax ah. Abiaryerka waxaa lagama maarmaan ah in la cabbo khamri, cayayaanka, sidoo kale, harraad.
Guga (Abriil - Maajo), ka hor inta aan dib loo dajin, guryo shinni ah ayaa la nadiifiyaa, sidaas oo kale waxay ku habboon tahay qalabka iyo dharka ay beekhaamuhu la shaqeeyaan qaybaha.
Dejinta qoysaska waxay ku qaataan wakhti diiran heerkul aan ka yarayn 10 ° C kulaylka, qoysaska daciifiya midoobaan, guryahooda waa la diiriyaa. Xilliga soo ururinta nectar xilliga ururinta, shinni waxaa loo baaraa cudurada suurtagalka ah ama cayayaanka ee finan.
Baro sida loo abuuro xanaaqa gacmahaaga.
Xilliga xagaaga, waxaad u baahan tahay inaad bedesho qaabka buuxa ee malabyada leh kuwa cusub waqtigooda, kicinta jadwalka wax soo saarka.
Xilliga dayrta, xayawaanka waxaa loo diyaariyaa jiilaalka iyo quudinta. Cuntada waa malab, perga ama sharoobada sonkorta. Si aad u diyaariso sharoobada, biyaha iyo sonkorta waxay qaataan laba illaa hal.
Marka nadiifinta nadaafadda, dadka dhintay ayaa gubanaya.
In xaalad ah ee soo raran, shinni noqon kara khatar u ah xayawaanka iyo aadanaha.
Nacnac wuxuu dhacaa sababaha soo socda:
da'da la filan karo ee ilmo-galeenka (4 sano);
haddii hawo la jebiyey buulka, waxaa jira kulayl badan;
ilmo-galeenku wuxuu u qoondeeyaa pheromones khaas ah, waqtigan waxaa jira xargaha (drones-ka horumarsan), waxaa sababa cudur ama da 'weyn oo ilmo-galeenka ah.
Hannaankan waxaa horay loo aqoonsan karaa sifooyinka soo socda:
Shaqaaluhu waxay bilaabaan dhismo firfircoon ee unugyada boqoradda;
Ma jiro tegitaan u soo baxaya nectar, sababta oo ah, taas sababtoo ah, ilmo-galeenku wuu daciifiyaa, maxaa yeelay ma la quudin;
ilmo-diciif ah oo aan daciifin uguma lihin ukumaha oo si weyn u yareeya cabbirka iyo miisaanka.
Waqtiga qiyaasidda habka waa May.
Waa muhiim! Si looga fogaado in ay soo baxdo, beekhaarku waa inuu xalliyaa xaaladda wakhtiga (10 cisho ka hor inta aanad soo bixin). Haddii finanku ay qorraxda ku jiraan, waxay u baahan yihiin in loo wareejiyo hooska. Guga waxaa lagaa doonayaa inaad abuurto sawir leh dhirta malab si adag si loola tacaalo bukaanka shaqada.
Maxay yihiin dhirta malabku ka duwan tahay kuwa duurjoogta ah?
Waanu fahmi doonnaa sida loo kala saaro sharraxa, si loo ogaado in qof shaqsi ah ama xayawaan ah uu kuugu yaryahay.
Dadka shimbiraha ah ee qiyaasta yar yar iyo midab yar.. Ma soo jiidan karaan indhaha, sababtoo ah, ka duwan nuqullada guriga, ma jirto cid ka ilaalisa, sidaa daraadeed aad ayay u xoog badan yihiin.
Beeraha xayawaanku way ka adag yihiin, waxay daboolaan masaafada dheer ee raadinta nectar, soo saaraan malab badan. Jidhkoodu aad ayuu u adkeeyaa cudurrada waxayna awoodaan in ay ku noolaadaan dhaxan hoos udhaca 50 ° C.
Xayawaanka duurjoogta ah waxay degaan oo abaabulaan aafooyin badanaa ku jira hollo geed ama qulqulka dhagaxyada. Ku dhaji meerkoodu si qumman, adoo isticmaalaya wax sida "sibidhka". Maadaama aysan jirin muraayad ay ku jiraan buulkooda, qaabka unugyada waa luuqad.
Bees waa shaqaale adag, waxay u duulaan masaafo weyn si ay u ururiyaan oo u dhiibaan nectar in rugta. Dabeecadda oo taxaddar leh iyo dabeecad leh oo ku aaddan iyaga ayaa bixin doona bixinta waxtarka wanaagsan ee waxtar leh.